Al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo xalay ku dagaalamay saldhig ciidan oo ku yaala Muqdisho – Radio Daljir
Al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo xalay ku dagaalamay saldhig ciidan oo ku yaala Muqdisho
Agoosto 31, 2013 1:47 b 0
Muqdisho, August 31, 2013 – Dagaal yahano ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala degmada Huriwaa ee gobolka Banaadir, halkaas oo uu ka dhashay dagaal khasaare geystay.
Wararka aan helayno ayaa sheegaya in weerarkaasi uu markii dambe isu bedelay iska-horimaad dhexmaray ciidamada dowladda ee saldhiga iyo ururka Al-shabaab, waxaana halkaas ku dhintay labba ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah.
Goob-jooge la hadlay war-baahinta ayaa sheegay in uu arkay maydka labba ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah, balse kooxda Al-shabaab ayaa dagaalkaas ka hadlay, waxayna ku sheegeen in uu ahaa weerar qorsheysan oo ay khasaare ku geysteen.
Saraakiisha dowladda ee degmada Huriwaa ilaa hadda kama aysan hadlin weerarka lagu soo qaaday iyo khasaaraha ka dhashay, balse degmada Huriwaa ayaa si weyn looga dareemay rasaasta la is dhaafsaday xalayto.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud oo warbaahinta dowladda la hadlay shalay, wuxuu sheegay in ay jiraan weeraro khasaare dhaliya oo ay kooxda al-shabaab ka fuliso gudaha gobolka Banaadir.